स्वास्थ्य/जीवन शैली Archives - Tufan Media News
कोहि व्यक्ति जस्तो खाना खाए पनि फुर्तिलो, बलियो, जाँगरिलो र मोटो हुन्छ भने कोहि व्यक्तिहरु भने जति सुकै प्रोटिनयुक्त वा सन्तुलन खाना खाए पनि एकदम दुब्लो, पातलो र कमजोर हुन्छ।बिहानको खाजा देखि बेलुकाको भोजन सम्म मिलाएर खाँदा पनि अत्ति नै दुब्लो र वजन कहिल्यै नबढ्ने समस्या प्राय व्यक्तिमा देखिन्छ। यसकारण कतिपय मानिसहरु ...
काठमाडौं - जंगलमा पाइने औषधिय गुणले भरिपुर्ण जामुन निकै फाइदाजनक छ । हेर्दा सामान्य लाग्ने जामुनले धेरै रोग निको पार्न सहयोग गर्छ । जामुनको आयुर्वेदमा पनि प्रयोग गरिन्छ । यसमा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, क्याल्सियम, आइरन, भिटामिन र फाइबर पाइन्छ । यसको सेवन गर्ने गरेमा मधुमेह रोगबाट टाढा रहन सकिन्छ । आयुर्वेदमा पनि ...
भिन्डीलाई हामी सामान्यतया एउटा तरकारीको रुपमा सेवन गर्छौ तर हामीबाट कति जनालाई थाहा छैन होला कि भिन्डीको सेवनले हाम्रो स्वाथ्यमा यति फाइदा गर्छ जुन आज तपाइले थाहा पाएर पर्नुहुनेछ चकित । गर्भवती महिलाले भिन्डी खानाले भ्रूणको दिमागको विकास राम्रो हुन्छ । साथै, भिन्डी खाँदा गर्भ तुहिने जोखिम पनि घट्छ । भिन्डीमा प्रशस्त म...
पानी मानव जीवनको लागि नभइ नहुने अति आवश्यक तत्व हो । मानिसको शरीरमा पानीको मात्रा करीब ६० प्रतिशत हुन्छ। पानीलाई उमालेर खानु राम्रो मानिन्छ तर स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले यसलाई धेरै उमाल्नु हानिकारक छ । यसकारण पानीलाई धेरै उमाले के के हानी पुर्‍याउँछ ? १. पानीको गुण घट्छ पानीलाई बढी उमालेमा जुन तत्वले बनेको यसको गु...
कुनै पनि केटीलाई आफूतर्फ आकर्षित गर्न सक्नु केटाको कला हो । सबैसँग यस्तो कला हूँदैन । तर कुनै पनि स्त्रीलाई आकर्षित गर्न कुनै विशेष शुत्र नै भने हुँदैन । केटामा केही गुण हुनु पर्छ जुन हरेक महिलाले मन पराउँछन् । यदि कुनै पनि केटीले तपाइँलाई हेर्दिने भने पनि पिर नगर्नुस् बानीमा केही सुधार गर्न मात्र जरुरी छ । यहाँ केटाका...
काठमाडौं। केही समयअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले को रोनाभा इरसको सं क्रमणबाट बच्न बेसार उपयोगी हुने सुझाव दिए । यो विषयले निकै चर्चा पायो । वैज्ञानिक पुष्टिबिना प्रधानमन्त्रीले हचुवाको भरमा यस्तो अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आ लोचना पनि भयो । सामाजिक संजालमा यस विषयमा ट्रोल पनि बनाइए । आ लोचना भएपछि प्रधानमन्त्रीले आफूले...
हरेक मानिस यौनको मामलामा क्षमतावान् रहन चाहन्छ । पार्टनरसहित आफैलाई सन्तुष्ट पार्ने उसको चाहना हुन्छ । तर कमजोर यौ नक्षमताका कारण मानिसको यौ न जीवन सन्तोषमय हुँदैन । यदि कमजोर यौन क्षमता विकास गर्न चाहनुहुन्छ भने यी वस्तुको सेवन निकै उपयोगी साबित हुनेछ । १.केरा: पोटासियम लवणको सबैभन्दा ठूलो श्रोत केरा हो । उच्च ...
थाहा पाउनुहोस : यी ३ बार भुलेर पनि कपाल र नङ नकाट्नुस्,अशुभ हुन्छ
नेपालमा आफ्नो आफ्नो धर्म ,परम्परा तथा सस्कृति अनुसार फरका फरक किसिमको रुढीबादी मान्यताहरु रहेका छन् । कसैले के गर्नु नहुने , कुन दिन के गर्न नहुने भन्ने जस्ता मान्यताहरु रहेका छन् ।त्यसैसगँ सम्बधित आज हामी हप्ताको ७ बार मध्ये कुन बार के गर्नु हुन्छ र के गर्नु हुदैन् भनने विषयमा कुरा गर्न गइरहेका छौ । यसै अनुसार तपाइको...
आजकल अधिकाशं मानिसमा राति मोवाइल चलाउने बानी हुन्छ । जसका कारण उनीहरु चाडै निदाउन सक्दैनन् । तर कतिपय मानिस यसलाई अनिन्द्राको समस्या बताउछन् । तर साच्चै राति ढिलोसम्म निद्रा नआउने वा अनिन्द्राको समस्या छ भने तपाईकालागी निदाउनका लागी एक काइदाको उपाय छ, कागती । हो दिनभरि स्ट्रेसमा काम गर्ने र राति राम्रो सुत्न नसक्ने ...
के गर्भवती महिलालाई शा-रिरीक सम्बन्ध राख्ने इच्छा हुन्छ ? (भिडियाे)
याै न सम्पर्क भने पुरुष र महिला दुबैमा चाहिने एक मनाेञ्जन हाे । लगातार यौ नस म्पर्क गरीरहँदा जब महि नावारी बन्द हुन्छ र त्यसपछि १०/१५ दिन पछाडि चेकअप गराउँदा ग’र्भ रहेको जानकारी पाइन्छ । लगातार स म्पर्क गर्दा ग र्भप तन हुन्छ भन्ने हुँदैन त्यसैले यि दुईकुरा नै प्राकृतिक भएकाले गर्भ अवस्थामा सम्पर्क गर्दा असर गर्ने, नराम...